Olee otu Mbadamba ụrọ si agbanwe agbanwe ahịa | Martech Zone
Olee otu Mbadamba ụrọ si agbanwe agbanwe àgwà ịzụ ahịa
Saturday, July 7, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ na Ọdịnaya bụ Eze, mgbe ahụ UX ga-abụ eze nwanyị. Site na uto dị egwu nke mkpanaka na mbadamba, ahụmịhe onye ọrụ (UX) nwere ike inwe mmetụta kachasị na uto ahịa na mpụga ogo ọdịnaya ahụ n'onwe ya. Ahụmahụ ndị a nwere ike agakwaghị agọnahụ na a gharịrị ịtụle ya ka ị na - edozi ọnụnọ gị n'ịntanetị.
Ihe omuma ihe a sitere Monetate: The burgeoning mbadamba mbadamba mere ka nghọta na ọnọdụ na ngwaike mkpa mgbe optimizing a website ike a mkpa ahịa ahụmahụ. Ihe omuma ihe omuma a gunyere ozi banyere omume nke ndi na-ere ahia, tinyere ufodu ihe omuma di iche na nke ohuru Ego EQ akụkọ.
Tags: Commerceecommerceipad ire statsshoppingzụ ahịa ipadipad ịzụ ahịaazụmahịa mbadambaịzụ ahịa mbadambaahia